Ny Fomba Fijerin'ny Olona Ny Fiainana Sy Ny Sosialista Ao Amin'ny Tafika Eme Mail Mailaka E-mail
Ao amin'ny ara-barotra an-tserasera an-tserasera, ny vaovao farany dia miompana amin'ny mpanjifa azy. Ny antony dia efa somary efa ela ihany ianao no nividy marketing amin'ny e-mail. Ny e-mail nalefan'ny mpampiasa sy ny sehatra manokana manokana dia tsy tokony hohadinoina ny fampiasana azy ho an'ny mpampiasa azy, fa mbola manampy anao amin'ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny SEO.
Ny sehatr'ireo mpividy dia miantso ny fiarahamonina sôsia ho toy ny fanoratana mailaka. Ny tambajotram-pifandraisana iray dia manangona ny fitantanana ny alàlan-dry zareo amin'ny fomba hafa toy ny fifampiraharahana miaraka aminy. Ny fiarovana ara-tsosialy sy ara-tsosialy sy ara-tsosialy sy ara-tsosialy. Tsy misy, toy ny fampiasana an'io lakandrano io tsy an-trano.
Julia Vashneva, mpikarakara ny mpividy avy amin'ny mpanjifa Semalt Digital Services, mandinika ny momba ny fiarahamonim-pirenena sosialy.
Ho an'ny SEO, dia tokony:
Fanamboarana ny mpamaky efijery Ho any amin'ny fizarana anatiny
Hamarino ny zavatra rehetra omenao izay omena anao gratuitamente. Ity lahatsoratra ity dia manoratra momba ny fahatsoram-po ho an'ny fampahalalam-baovao mahazatra toy ny mailaka. Raha ny momba ny tranonkala, ny video dia afaka manoratra maimaim-poana na maimaim-poana. Ny anton'izany dia ny fisoratana anarana momba ny e-mail amin'ny mpanjifa lehibe.
Navoaka tamin'ny endriky ny faritra ny loka, hany ka ny solontenan'ny solicita no fampahalalam-baovao, toy ny nomena..Ny fahasamihafana ara-pahasalamana dia tsy maintsy manomboka amin'ny mpividy ny mpanjifa, ny mpitsoa-ponenana indrindra indrindra ny mpitsoa-ponenana.
Ny tranonkala safidy sosialy dia ahitana Facebook, Twitter, LinkedIn ary Pinterest. Ny tranonkala Esses dia samy manana ny endrika samihafa, nefa tsy misy hafainganam-pandehanana hampitatra ny marketing amin'ny mailaka. Ny fandefasana ny "Tombontsoa" sy ny "Squeeze Page", ny fitsaboana dia ampiasaina amin'ny finday avo lenta tsy misy tranokala. Ny segondra vitsivitsy dia toy izao manaraka izao dia mety hampiasa betsaka indrindra amin'ny sehatra sosialy ny habaka:
Ny fialantsasatra dia manaiky fa ny mpilatsaka an-tsitrapo no tena mpilatsaka an-tsitrapo. Raha ohatra ka, toy ny olon-tsotra, toy ny Facebook sy Twitter, dia afaka mametraka ny tranokalam-pifaneraserana ahafahana mampiavaka ny segondra an-tserasera, toy ny demografika, ny Internet, ny Internet ary ny geografic localisation. Ny tambajotra SEO dia manome fahafahana ireo mpividy vaovao mpanjifa mba hifantoka amin'ny fisoratana anarana amin'ny mailaka misy anao, mijery ny métricas sy ny an-tserasera. Navoakan'ny mpitsoa-ponenana teny anivon'ny fiarahamonin-tserasera, ianao dia afaka mametraka ny lisitry ny mailaka manan-danja.
Ny fiarovana ny tontolo iainana rehetra dia tsy misy afa-tsy ny mahatsara ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany. Ny lahatsoratra dia ahitana ny sary / sehatra, biografia, sary, sary famantarana, sns. Io dia iray amin'ireo faritra ho an'ny fampahalalam-baovao momba ny marika izay ho azonao. Ny fahazoan-dàlana Twitter dia ahitanao ny rohy mankany amin'ny biografia. Ny biografia dia iray amin'ireo faritra hanamboarana URL iray ao amin'ny tranokalanao.
Ireo mari-pamantarana karazan-tsarimihetsika dia azo ampiasaina amin'ny tontolo sosialy rehetra. Raha ohatra, ny LinkedIn dia manana fitaovana maimaim-poana ho an'ny famoronana sy ny Lead Generation Card. Ny seho SEO no sehatra ahafahana manokatra toerana malalaka, toy ny fampidinana ny lisitry ny mailaka rehetra entina hampiasana ny mailaka, p. Força de vendas.
Raha ny marina dia tena mahomby tokoa ny fampiasana ny lisitry ny mailaka. Lembre-se, raha resaka sosialy. Ny fampiasana azy dia ampiasaina amin'ny fampiasana azy, ka mety hahazoana tombontsoa lehibe ho an'ny fiarovana an-trano ianao raha te-hijery ireo pejy manokana. Portanto, amin'ny maha-fiarahamonina mozika azy, dia manolotra sehatra marobe ho an'ny SEO manokana ho an'ireo mpandray anjara amin'ny lisi-pifidianana Source .